क्रिस्टी अगाथा। उनको जन्मको वार्षिकोत्सव। वाक्यांश चयन | वर्तमान साहित्य
क्रिस्टी अगाथा। उनको जन्मको वार्षिकोत्सव। वाक्यांश चयन
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | 15/09/2021 12:00 | लेखकहरू, नोभेला, कालो उपन्यास
क्रिस्टी अगाथा, निर्विवाद Reina को रहस्य र को जासूस उपन्यास, शैली को सबै प्रशंसकहरु को लागी अझै पनी धेरै उपस्थित छ। र आज उनको जन्मदिन हो। उनले लगभग आफ्नो दिन मा सबै बिक्री रेकर्ड तोडे Million 4.000 मिलियन पुस्तकहरू बिक्री भयो र मंच मा जारी। यसको अतिरिक्त, उनको जीवन ती एघार दिनहरु संग रहस्य बिना थिएन कि उनी वास्तव मा के गरेकी थिईन् बिना हराइरहेकी थिइन्। र, चूंकि आज उनको जन्मदिन हो, हामी उनलाई एक पटक यो संग यो पढेर याद हुनेछ वाक्यांश र टुक्रा को चयन आफ्नो काम को।
क्रिस्टी अगाथा। वाक्यांश र टुक्रा को चयन
भाग्य कहिलेकाहीँ उनीहरु के गोप्य राख्न चाहन्छन् भन्ने पत्ता लगाएर आनन्द लिई मानिसहरु लाई ठट्टा गर्न को लागी देखिन्छ।
निलो ट्रेन को रहस्य
कहिले काहिँ म पक्का छु कि ऊ एक ह्याटर को रूप मा पागल हो र तब मात्र जब ऊ उसको सबैभन्दा पागल हो यो मलाई लाग्छ कि उसको पागलपन को लागी एक तरीका छ।
शैलीहरूको रहस्यमय मामला
"हत्याको अभिप्राय कहिलेकाँही अत्यन्त न्यून हुन्छ, आमा।"
"सबैभन्दा साधारण मनसाय के हो, श्री Poirot?"
"सबैभन्दा सामान्य पैसा हो।" त्यो हो, यसको विभिन्न असरहरु मा जित्न को लागी। त्यसपछि त्यहाँ बदला र माया, र शुद्ध डर र घृणा, र परोपकार छ।
"ओ हो, महोदया।" मैले सुनेको छु; भन्नुहोस्, B द्वारा मात्र सी को फाइदा को लागी समाप्त गरीएको राजनीतिक हत्याहरु प्राय एकै खेलमा आउँछन्। कसैलाई सभ्यता को लागी हानिकारक मानिन्छ र त्यस को लागी हटाइन्छ। यस्ता मानिसहरु बिर्सन्छन् कि जीवन र मृत्यु राम्रो प्रभुको व्यवसाय हो।
नील नदीमा मृत्यु
महिलाहरु अवचेतन एक हजार थोरै विवरण अवलोकन, थाहा बिना कि उनीहरु यो गरीरहेछन्। तपाइँको अवचेतन दिमाग यी सबै साना चीजहरु सँगै जम्मा हुन्छ र परिणाम अन्तर्ज्ञान कल गर्दछ।
रोजर एक्रोइड को हत्या
"आदमले भने," सबै मानिसहरु जहिले पनि केहि जान्दछन्, "यो केहि हो भने पनि उनीहरूलाई थाँहा हुँदैन।
त्यहाँ शंका को वातावरण मा बाँच्न को रूप मा यति डरलाग्दो केहि छैन, आँखाहरु लाई तपाइँ देखीरहनुभएको छ र कसरी माया उनीहरु मा डर को लागी परिवर्तन हुन्छ, केहि डरलाग्दो अरु कसैलाई शंका गर्न को लागी तपाईलाई नजिक र प्रिय। यो विषाक्त छ, एक miaz।
रेल मार्गनिर्देशनको रहस्य
एक महिला झूट कहिले हुनेछ? कहिलेकाँही आफैंबाट सामान्यतया उनी माया गर्ने मान्छेको कारणले। सधैं आफ्ना बच्चाहरूको लागि।
गल्फ कोर्समा हत्या
तिनीहरूलाई के आवश्यक छ उनीहरूको जीवनमा एक अनैतिकता हो। त्यसोभए उनीहरु अन्य व्यक्तिमा उनको खोजीमा व्यस्त हुने थिएनन्।
दस साना कालो मानिसहरू खाना खान गए। एक जना डुबे र तिनीहरू बाँकी रहेका थिए: नौ।
नौ सानो कालो ढिलो सम्म रह्यो। एउटा उठेन र तिनीहरू बाँचे: आठ।
आठवटा साना कालोहरू डेभन हुँदै गए। एक जना भाग्यो र तिनीहरू बाँचे: सात
सात साना काला केटाहरूले बन्चरोले काठ काट्यो एउटा दुई मध्ये काटियो र तिनीहरू बाँकी छ: छ।
छवटा साना कालो केटाहरु एक मौरी संग खेले। उनीहरु मध्ये एक माहुरीले टोकेको थियो र उनीहरुलाई छोडियो: पाँच।
पाँच साना कालो मानिसहरू कानूनको अध्ययन गरे। तिनीहरू मध्ये एकले डक्टरेट पाए र तिनीहरू बसे: चार।
चार साना काला मानिसहरू समुद्रमा गए। रातो हेरिringले एउटा निल्यो र तिनीहरू बाँकी रहेका थिए: तीन।
तीन सानो कालो चिड़ियाघरको माध्यमबाट हिंडे। भालुले उनीहरूलाई आक्रमण गर्‍यो र तिनीहरू बाँकी रहेका थिए: दुई।
दुई साना कालो सूर्य मा बसिरहेका थिए। ती मध्ये एक जलाइएको थियो र रह्यो: एउटा।
एउटा सानो कालो मानिस एक्लो थियो। उसले आफैंलाई फाँसी दियो र त्यहाँ कोही बाँकी रहेन।
दस साना कालो
तपाइँलाई थाहा भएको सबै कुरा कहिल्यै नभन्नुहोस्, त्यो व्यक्तिलाई पनि होइन जुन तपाइँलाई राम्रोसँग थाहा छ।
रहस्यमय श्री ब्राउन
जोशपूर्वक अर्को मानव प्राणी को हेरचाह सधैं खुशी भन्दा बढी पीडा ल्याउँछ; तर एकै समयमा, Elinor, एक त्यो अनुभव बिना हुनेछैन। जो कोहि माया गर्दैनन् कहिल्यै बाँच्दैनन्।
एक दु: खी साइप्रस
हात्ती सम्झन सक्छ, तर हामी मान्छे हो र भाग्यवशै मानिस बिर्सिन सक्छ।
हात्तीहरु सम्झना गर्न सक्नुहुन्छ
सत्य यो हो कि धेरै मानिसहरु, पुलिस बाहेक, यो दुष्ट संसार मा अत्यधिक विश्वस्त छन्। उनीहरुलाई जे भनिएको छ त्यसमा धेरै विश्वास गर्नुहोस्। म यो गर्दिन। माफ गर्नुहोस्, तर मँ सधैं व्यक्तिगत रूपमा चीजहरु अवलोकन गर्न चाहन्छु।
पुस्तकालयमा एउटा शव
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » क्रिस्टी अगाथा। उनको जन्मको वार्षिकोत्सव। वाक्यांश चयन
गोडोटको लागि पर्खँदै
जोसे जेभियर अबासोलो। मूल संस्करण को लेखक संग साक्षात्कार